Ko 3D akadhindwa mweya? Torai kuziva Hottest 3D zvaidhindwa - China Cixi Lanbo Printing
Ko 3D akadhindwa mweya? Torai kuziva Hottest 3D zvaidhindwa
Vakawanda kuteerera 3D kudhindwa, pakutanga kwezvose, nokukwezvwa yakaisvonaka zvinhu zviduku radhindwa 3D. Uyezve, dzimwe shamwari achatarisira pamusoro mabasa akasiyana yemashoko 3D vaidhinda, uye 3D zvaidhindwa vave yaregeredzwa kakawanda. Kutaura zvazviri, 3D zvaidhindwa zvinogona kunzi chinokosha zvinhu hwaro kukura 3D rokudhinda michina. Pokumuka zvinhu zvikuru kunotema kana 3D kudhinda inogona kushandiswa munzvimbo dzakawanda.
Parizvino, 3D zvaidhindwa kunyanya zvinosanganisira polymer zvinhu, simbi zvinhu, upfu zvinhu, zvedongo zvinhu uye anoumbwa nevazhinji zvokuvakisa.
Polymer zvinhu kunyanya zvinosanganisira injiniya mapurasitiki, bio-mapurasitiki, thermosetting mapurasitiki, photosensitive Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti, nezvimwewo, uye chokupika rakasiyana-siyana nezvinhu zvakasiyana.
Engineering mapurasitiki rinoreva maindasitiri mapurasitiki aishandiswa maindasitiri zvikamu kana dzokunze casing zvinhu. Zviri mapurasitiki nesimba kwazvo, kwechirwere nemishonga, kupisa nemishonga, noukukutu uye kuchembera nemishonga. Zviri rudzi 3D zvokudhinda zvinhu ane zvakasiyana-siyana mafomu; bioplastics It zvikurukuru ine pla, PETG, PHB, nezvimwewo, uye ane biodegradability zvakanaka; thermosetting nebwe aine simba uye moto nemishonga, uye ndiyo yakakodzera chaizvo kuti upfu Laser sintering Anoumba muitiro vachishandisa 3D kudhinda; photosensitive nebwe ane dzichimhanya okurapa akurumidze, tafura Excellent yakaoma kuita, mvere chitarisiko pashure kuumbwa ndiye kusarudza zvakawanda mukuru-zvakarurama zvinogadzirwa rokudhinda.
Kunyange zvazvo kuitika 3D zvaidhindwa vari mapurasitiki, mashoko zvokuimba simba zvakanaka uye zvemagetsi conductivity pamusoro simbi vakaita Vatsvakurudzi chaizvo kudhinda simbi zvinhu. Huru simbi zvinhu zvinosanganisira nesimbi ferrous kusanganisira Stainless simbi uye superalloys, uye asiri ferrous nesimbi akadai titanium, magnesium chiwanikwa, uye gallium.
Hakuzi munhu mapurasitiki zvokunyama kana chakaumbwa zvokunyama, asi yayo yakanaka anochinjika kuna 3D kudhindwa michina, upfu zvinhu vachiri kusarudza zvakanaka 3D rokudhinda. 3D Kudhinda kunoda mukuru upfu zvokuvakisa, uye Kuumbwa upfu kunodiwa kuti zvakanaka zvinhu formability, mukuru Kuumbwa simba, duku upfu PARTICIPLE saizi, kunetseka agglomeration, zvakanaka rinopfungaira pfuma, zvakakodzera arambe achirema uye porosity, nokutsanya kuomesa uye nokuomesa. Wokutanga kuzvidzora dzikabereka sprinkler jecha mhando 3D aidhinda yakataurwa VANOBVUNZA Technology Co., Ltd. anoshandisa Goldstone jecha upfu zvinhu.
Aluminosilicate zvedongo upfu inogona kushandiswa 3D akadhindwa zvedongo zvigadzirwa. The 3D akadhindwa zvedongo chigadzirwa ndiyo Eriya aitombotyawo mvura, kupisa (kusvika 600 ° C), recyclable, dzisiri chepfu, asi ayo simba haasi mukuru, unogona kushandiswa yakanaka cookware, tableware (mikombe, nembiya, ndiro, zai nemikombe uye Coasters)) uye musha kushongedzwa zvokuvakisa zvakadai zvigadziko, usina kukonekita, vases, uye Kunstwerke.
Pasina mubvunzo, sezvo nemhaka 3D yokudhinda, 3D zvaidhindwa achava inokosha musika yemberi 3D yokudhinda. More uye zvakawanda zvinhu yakanaka waivako dzichakurukurwa muhurukuro kusimudzira chitange 3D rokudhinda indasitiri. Uyezve, kuwedzera 3D zvaidhindwa, vadzidze makirisito zvemichina uye chinoumba zvinoumba 3D Kudhinda ndeimwe budiriro inokosha kukura wechipfuwo 3D rokudhinda indasitiri. The dutu dzakatevedzana 3D aidhinda raparurwa nesangano BVUNZA ndiye wokutanga inkjet printhead yakatanga muna China. (3D zvokudhinda chinoumba zvinoriumba) kunokoshawo, uye ndinovimbawo kuti zvakawanda makambani ari China anogona mari yakawanda simba kuva 3D kudhinda makirisito michina pane kuvimba zvachose dzimwe rwokugadzira.